Adrien Rabiot oo ka warbixiyay sababta ku qasabtay inuu ku biiro Juventus, Muxuuse ka yiri Cristiano Ronaldo? – Gool FM
Adrien Rabiot oo ka warbixiyay sababta ku qasabtay inuu ku biiro Juventus, Muxuuse ka yiri Cristiano Ronaldo?
(Turin) 02 Luulyo 2019. Laacibka cusub kooxda Juventus ee reer France Adrien Rabiot ayaa ka hadlay dhowr arimood, kaddib markii uu maanta kasoo muuqday shirkiisii jaraa’id ugu horeeyay ee Bianconeri.
Adrien Rabiot ayaa waxyaabaha uu shirkan jaraa’id kaga hadlay ka mid ahaa sababaha ku kalifay imaatinkiisa kooxda Juventus iyo himilooyinka uu doonayo inuu gaaro mustaqbalka.
Kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa si rasmi ah u shaacisay shalay inay Adrien Rabiot beeca xorta ah kaga soo qaateen Naadiga Paris Saint-Germain.
Adrien Rabiot ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay:
“Juventus waxay i raadineysay xili hore, waxaana la gaaray waqtigii aan imaan lahaa halkan, balanqaadkaygu waa inaan ka caawiyo waxyaabaha ay bar-tilmaameedka ka dhiganayaan, kooxdan waxay leedahay taariikh weyn, ciyaartoy badan oo Faransiis ah ayaana soo martay”.
“Buffon wuxuu i siiyay talooyin badan wuxuuna ii sheegay wax badan oo ku saabsan Juventus, wuxuu ii sheegay hadii aan doonayo inaan sii ciyaaro inaan u ciyaaro Juventus, waxaana qaatay talo-bixintantiisa”.
“Waxaan dhageystay oo aan ku raaxeystay talo-bixintanta Buffon, sababtoo ah wuxuu ka heystaa khibrad weyn, Juventus waa koox weyn, taas ayaana sababtay in aan doorto, Champions League ma ahan mid si kaddis ah loogu guuleysto, laakiin waxay u baahan tahay waayoaragnimo, sidaas darteed waxay gaareen laba jeer finalka Champions League”.
Intaas kaddib waxaa la weydiiyay su’aal ku saabsan Cristiano Ronaldo wuxuuna ku jawaabay:
“Cristiano Ronaldo waa geesi cajiib ah, laakiin waxaa jira ciyaartoy kale waa weyn oo halkan ku sugan isla markaana awood ku leh qolka dhar badalashada, Waxaan doonayaa inaan wax badan kula guuleysto Juventus, isla markaana aan iska illoobo wax walba ee horey u dhacay”.
Maxaa ka jira wararka sheegaya in Man United ay heshiis shaqsi ah la gaartay Bruno Fernandes? wariye Nicolo Shira ayaa ka warbixiyay.
Real Madrid oo go'aan adag ka gaartay arrinta Paul Pogba - miyey isaga hareen raacdadii ay ugu jireen?